Apple TV-gaagu kaligiis miyuu shidaa saqda dhexe? Kaligaa ma tihid | Wararka IPhone
Apple TV-gaagu kaligiis miyuu shidaa saqda dhexe? Kaligaa ma tihid
Pablo Ortega | | Apple tv, iPhone, Noticias, Alaabada Apple
Waxaan moodayay inaan waalanayo.
Habeen kasta ka hor intaanan seexan, hawshaydu waxay tahay "inaan seexiyo Apple TV." Dami TV-ga oo dami barka dhawaaqa ». Habeen wanaagsan Laakiin saqbadhkii, markaan soo toosay, waxaan arki jiray nal xasilloon oo feejigan oo ka socda TV-ga Apple. «Waxaan ku dhaaran lahaa inaan demiyo«, Waxaan u maleeyay. Ifafaaleyaasha aan caadiga ahayn way sii socdeen. Markii aan shaqada ka imid waxaa jiray maalmo markii TV-ga Apple uu igu sugi jiray.
Taasina maahan. Dhibku wuxuu bilaabay inuu ku faafo telefishankeyga, oo mararka qaar isaguna iskiis isu rogrogo, sabab la'aan. Taasi waa markii aan ka shakiyay: kaliya TV-ga Apple-ka miyuu daaran yahay? Runtiina taasi waa waxa dhaca, sidaan ka arki karno gudaha Shirarka rasmiga ah ee Apple. ka Jiilka afraad ee Apple TV wuxuu leeyahay cayayaan sababa inuu kaligiis shito, inkasta oo aan iyada seexinnay. Dhibaato mararka qaarkood sidoo kale ku faafta telefishinnada ay ku xirmaan iyada oo loo marayo HDMI-CEC.
Wax walba waxay muujinayaan inay sabab u tahay dhibaatada software-ka iyo inay sahlanaan laheyd in lagu saxo cusbooneysiinta nidaamka qalliinka. Si kastaba ha noqotee, tvOS-kii ugu dambeeyay ee loogu talagalay horumariyeyaasha, oo la sii daayay toddobaadkan, waa la la'yahay raad kama helin xalka cayayaankan. Haddii Apple aysan ka warqabin guuldarradan, waxaan u maleynayaa in dhammaan faallooyinka laga bixiyay golahooda rasmiga ay caawin doonaan.
Cayayaan nasiib darro ah, gaar ahaan haddii ay sidoo kale saameyn ku yeelato telefishannadeenna, tan iyo tan biilasha korontada ayaa saameyn doona. Waxyeello domino ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple TV-gaagu kaligiis miyuu shidaa saqda dhexe? Kaligaa ma tihid
Ahhh ma waxaad u jeeddaa midka aan ku xirneyn waxyaabaha korontada? Haa, nooca leh badhan casaan fiican oo runti waxyaabaha shidaa oo damiya! Waxay yihiin kuwo aad u qabow, mucjiso farsamo ...
Iyo haa, waxaan u maleynayaa inaad waalatay 😉
Ilaahayow, adduunka jooji, waxaan xisaabinayaa in qarashkan koronto uu deynsanayo meeraha oo qarxayo .. Waxaan u maleynayaa inaad cambaareyso iyaga si ay biilka u bixiyaan, si kastaba ha noqotee. Sidii ay yiraahdeen, fiilooyinka korontada ayaa jira taas, oo haddii aad dhab ahaantii ka walaacsan tahay isticmaalka korantada, ka fur waxyaabaha oo ha uga tagin heeganka ama wixii la mid ah.
Waan layaabay faallooyinkii hore laakiin xitaa intaa kaba sii daran xalintaada beenta ah. Aan aragno haddii aan haysto aalad elektiroonig ah oo kuu oggolaaneysa inaad kaga tagi karto istaagga, haddii ay daarto muddo ka dib waa uun inay dhibaato ama bug leedahay sida uu sheegay Pablo. Waa maxay jahannamada ku saabsan ku-talinta xarigga korontada? Laakiin maxaad sameyneysaa Ma aha inaan ka go'o korontada gebi ahaanba (taas oo ah waxa badhanka yar ee casaanka ah ee aad ka hadlaysaa sameyneyso) dhammaan qalabkeyga (Apple TV, Telefishanka, iwm) maxaa yeelay Apple TV wuxuu leeyahay cilad ku jirta OS-keeda oo xitaa saameeya aaladda TV-ga. Tani waa wax ay tahay inuu Apple xalliyo hadda.
Waxay umuuqataa inaad hoos udhigayso dhamaan muhiimada xaqiiqda sababtoo ah guuldaradii Apple TV OS waxaan ku qasbanaaneynaa inaan sameyno botches si aan uxalino fashilka qeybta sadexaad, waa wax cajiib ah. Intaas waxaa sii dheer, sida aniga xaalkeygu yahay, inbadan oo naga mid ah uma fududaan marinka qaawan ee ka dambeeya golaha wasiirada meesha aan ku heysano TV-ga, iyo waa maxay cadaabta! Waa inaanan taas sameynin markay qalabkaygu qasab ku noqonayo habka istaagga haddii aan haysto sidaas ayayna ku leeyihiin hawshaas oo la hirgeliyey ee qof walba maanta haysto.
Kaalay, tani waa mid xasaasi ah, waxaan u kacaa habeenkii inaan cabbo biyo tusaale ahaan waxaan arkaa in sixir ahaan TV-gayga loo daaray, luminta nal iyo nolol faa iido leh sababo la xiriira fashilaada Apple TV OS iyo xalkaagu waa, taa bedelkeeda u baahan Codsi si uu u hagaajiyo, inuu ii iibsado xarig koronto ??? Sidaan idhi, waxaan ku riyoodaa fikradaha qaarkood, maxay tahay panda.
Waxaan u maleynayaa inaad la mid tahay adiga. Waa waali in dadku aad u waafaqsan yihiin oo ay iska dhigayaan inaad xallinayso dhibaatooyinka soo saaraha alaab kaa iibiyay alaabtu ay tahay inuu xalliyo (iyo habka ugu sarreeya qiimaha sarreeya). Waan jeclahay Apple, laakiin ma difaaci doono qaladaadkaas oo kale, in qaladku dhaco waa bini aadam, laakiin waxaa lagu bixiyaa tayo. Iyaga ha daayaan dhibaatada nacaladda leh ...
Badhanka cas ee xariijimaha, waxaa ku qoran: xariiq. doh!
Aniguna adiga ayaan ku riyoodaa, xaalad heegan ah ... Hahahaha. Oo waxaad hubtaa inaad sidoo kale aaminsan tahay Santa Claus, sax?
Ma jecli tan laakiin adiga ayaa ah qofka bilaabay horyaalnimada…. Way cadahay, waxaan horteenna haysannaa nacaska blogka.
Gee, oo maxaad ku siisaa? abaalmarin? Waad ku guuleysatay iyada, hambalyo!
Gebi ahaanba waan kugu raacsanahay. Waxa Apple ay tahay inuu sameeyo waa inuu hagaajiyo dhibaatada. Si sax ah ugama iibsaneyno alaabada suuqyada dhogorta.
Waxaa loo maleynayaa inay jareyso tikniyoolajiyadda mana ahan inaan isku dhex yaacno sida dadka qaar soo jeedinayaan.
Ku jawaab Antonio Teixidó
Taasi mar bay igu dhacday. Dib ayaan uga kiciyey menu-ka dibna dib ugama aanan noqon. Aniguna waan hayaa tan iyo maalintii ay soo baxday.
Ku jawaab mitoba
Xalka daqiiqadlaha ah ee aan helay ayaa ah in la tirtiro dhamaan barnaamijyada wali furan oo kaliya TV-ga Apple uusan sii daarin
Jawaab Armando Carrasco
«Telefishinkaaga Apple TV ma daaraa oo keliya saqda dhexe ee habeenka? Keligaa ma tihid, waxaad ku haysataa guri-yaqaan poltergeist a »
Xasaasiyadda xad dhaafka ah ee taabashada fog ayaa waxay naga dhigeysaa inaan inta badan fahanno si ula kac ah, iyadoo wax yar la xoqinayo miiska sariirta dhinaceeda, waxay sababi laheyd aaladda iyo telefishanka inay daaraan.
Ku jawaab CsC
Adiga ayaa iska furaya telefishanka Apple taasna waa (power cable), markaa waad dheereyneysaa nolosha illaa inta dhibaatada laga xalinayo, taas oo ah tan aan sameeyo.
Ka sokow, maahan oo kaliya inay shidan tahay laakiin qalab kale ayaa xambaarsan macluumaadka, tani waxay noqon kartaa taleefanka gacanta haddii ay dhacdo inaad haysato iPhone. Tani waxay u adeegtaa in marka qofku qabsado Apple TV uu si dhakhso leh uga jawaabo. Laakiin haddii ay tahay inay fuliyaan cusbooneysiin.
Gurigeyga waxaan ku leenahay seddex jir telefishinka Apple-ka ah iyo iphone-yada iyo ipad-yada dhowr jeerna marwalba waan fiirsanayay faahfaahintaas, qaasatan hada waxaan ogaadaa tan iyo markii aan iibsaday baarka dhawaaqa oo aan daawaday surwaalka ku xiran munaasabadaha qaarkood.
Maanta waa 26/07/2017 mana jirto wax lagu xaliyo.
Apple ayaa wajihi doonta ganaax weyn Yurub
Apple waxay xaqiijineysaa inay noqon doonto kafaala-qaade Super Bowl-ka